Dowlada oo ka hadashay Dhagxaanta la dhigey Wadada Maka Al Mukaramma
Weriye ka shaqeynayay gobolka Tigray oo xabsiga loo taxaabay
Home News Dowlada oo ka hadashay Dhagxaanta la dhigey Wadada Maka Al Mukaramma
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay dhagxaanta la dhigey xalay wadada Maka Al Mukarama gaar ahaan isgoyska dabka.
Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalmow ayaa sheegay in culeys dhanka dhaqdhaqaaqa shacabka ah uu ka dhashay,dib u eegis deg deg ahna lagu sameyn doono tallaabadaas, sidoo kalena la xoojinayo amniga.
“ Go’aanka Isgoyska Dabka qeyb ahaan lagu xiray wuxuu abuuray culeys dhanka dhaqdhaqaaqa Shacabka. Inshallah dib u eegis deg deg ah ayaa lagu sameynayaa iyada oo had iyo jeer ahmiyadda la siinayo daryeelka shacabka ,lana sii xoojinayo adkeynta amniga;”ayuu ku daabacay boggissa Facebook afhayeenka xukuumada Maxamed Ibraahim Macalimow.
Waxaa saaka laga dareemay saxmad badan wadada Maka Al Mukarama oo ka mid ah wadooyinka waaweyn ee caasimada dalka ee Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay fiidkii waxaa ay dhagxaan waaweyn ku jartay wadada Dabka ee magaalada muqdisho, kadib markii shalay gaari si xowli ah kusoo maray halkaas uu ku qarxay barta-koontorool ee Isgoyska sayidka ee Muqdisho.
Previous articleHaween u shaqeynayay dowlada oo saaka lagu diley Muqdisho
Next articleBooliska Soomaaliya oo ka hadlay dil saaka loo geystey haween magaalada Muqdisho
Mahad Salaad “Farmaajo wuxuu ka cararayaa Bannaan baxa Maalinta Sabtida, maxaa diidaya inaan soo hormarsano”